CSB II MORARANO : Nahitana zaza teraka tsy nisy foetra, bingo tongotra, efa maty avy tao am-bohoka
Hatairana ny an’ireo rasazy tao amin’ny Hopitaly Morarano ( Csb II) ny marainan’ny zoma 26 oktobra lasa teo. 2 novembre 2018
Tovovavy 17 taona no niteraka zaza sampona. Araka ny angom-bavao, dia efa maty avy tao am-bohoka ilay zaza. Vavy kely izy io, nilanja 3 kg teo am-pahaterahana.
Fahasamponana maro lafy no nahazo azy na ilay antsoina amin’ny teny vahiny hoe « poly malformation congénitale ». Tsy misy foetra tahaka ny zaza ara-dalana. Misy nofo lavalava sahala amin’ny atin-kena avy eo amin’ny toerana tokony misy ny foetrany. Bingo koa ny tongony. Raha nanontaniana ny reniny, dia nilaza fa tsy mba nihinankinam-panafody fahatany mihitsy nandritra ny fitondrana vohoka.
Misy amin’ireo mpitsabo izay nanontaniana no nilaza fa mety ho vokatry ny fikasana fanesorana an’ilay zaza tao am-bohoka no nahatonga izao zava-misy izao. Manamafy kosa ny reniny fa tena zaza nirina tokoa io zaza ary ary tsy nisy fikasana hanala azy velively.
Tsy mitsahatra mampahatsiahy ireo mpitsabo fa tsy tokony hihinankinam-panafody fahatany ny reny bevohoka indrindra eo amin’ny faha-3 volana voalohany itondrana vohoka. Ny fanaovana dokotera tena sy fihinanam-panafody tsy mandalo mpitsabo no matetika mahatonga ny fahasamponan’ny zaza ao am-bohoka.